फलक वायु मोटर, वायमेटिक मोटर विशिष्टता, 10 एचपी न्यूमेटिक मोटर
फलक वायु मोटर, १० एचपी वायमेटिक मोटर विशिष्टता
एयर मोटर्स - वायवीय मोटर्स
एक एयर मोटर (वायमेटिक मोटर) वा कम्प्रेस्ड एयर इञ्जिन एक प्रकारको मोटर हो जसले कम्प्रेस्ड हावालाई विस्तार गरेर मेकानिकल कार्य गर्दछ। एयर मोटर्सले टोक़ र रोटेशनल गति उत्पन्न गर्न संकुचित हावाको सुरक्षित, भरपर्दो उर्जा प्रयोग गर्दछ। धेरै फरक डिजाइनहरू उपलब्ध छन्। तपाइँ यहाँ वायमेटिक मोटर विशिष्टता पाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाइँलाई सबैभन्दा कुशल एयर मोटर, १० एचपी वायमेटिक मोटर वा आपूर्ति गर्न सक्छौं
am425 एयर मोटर, वा पनि फ्यान हावा मोटर।
एयर मोटर्सले कसरी काम गर्दछ?
एउटा एयर मोटरको प्रदर्शन इनलेट दबावमा निर्भर गर्दछ। स्थिर इनलेट प्रेशरमा, एयर मोटर्सले विशेषता रेखात्मक आउटपुट टोक़ / स्पीड सम्बन्ध प्रदर्शन गर्दछ। यद्यपि, केवल हवाको आपूर्तिलाई विनियमित गरेर, थ्रॉटलिंग वा प्रेशर रेगुलेसनको प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर, एयर मोटरको आउटपुट सजिलै परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
वाय मोटर प्रणालीको अर्थ के हो?
एक वायमेटिक मोटरले यसको अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त गर्दछ र वायमेटिक प्रणालीमा काम गरिरहेका कम्पोनेन्ट्सको जीवन विस्तार गर्दछ जब यो आफ्नो रेटेड गति (रेटेड इडल स्पीडको 50%) मा सकेसम्म नजिकको सञ्चालनमा छ। ऊर्जा सन्तुलन यस क्षेत्रमा उत्तम छ, किनकि कम्प्रेस्ड हावा दक्ष रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
के यो मोडेल पिस्टनको साथ छ? हो, हाम्रो मानक मोडेलहरू पिस्टनहरूसँग छन्। के तपाईं हावा मोटरको अन्य मोडेलहरू बनाउनुहुन्छ? उदाहरणका लागि पिस्टनको सट्टामा पिकअपको साथ?
हो, यो कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। एक फलक वा पिस्टन मोडेलसँग जुन मोटरको मुख्य शाफ्ट गतिमा कमी आएको छ।
वायमेटिक मोटर विशिष्टता
प्रयोग गरिने मोटरलाई खास स्पिन्डल गतिमा टोक़को साथ सुरू गरेर चयन गर्नुपर्नेछ। अर्को शब्दमा, सहि मोटरको छनौट गर्न तपाईलाई आवाश्यक गति र टोकरी थाहा हुनुपर्दछ। अधिकतम पावर आधा मोटरको स्वतन्त्र गतिमा पुगेको हुनाले, मोटर छनौट गर्नुपर्दछ ताकि पोइन्ट राखेको पोइन्ट मोटरको अधिकतम पावरमा सकेसम्म नजिक हुन सकोस्।